Izindwangu Zesiliva Esinwebekayo Ezingqimba - Ama-Buddhatrends
Lezi zinwele zomzimba ezigcwele ezigcweleyo zinezinwele ezinamanzi ezidala ukubukeka kwe-panty puffy. Indwangu elithambile, ukuphefumulela, ukuphefumula, nokugubha izinkinobho yizo zonke izici zebhonasi zalezi zembatho zansuku zonke. Gqoka phezulu ngekhonti ehlangene phezulu bese wengeza umgexo wesitayela wesitayela ukuwugqoka usuku lomsebenzi. Ungase futhi udale i-gypsy vibe encane ngokuthuthukisa i-panther look ye-panther nge-blouse yezilwane ezihamba phambili kanye namasongo amaningi e-bangle.
Ukuze uqoke izingane esikoleni, i-BBQ yendawo yangasese noma uhambo oluya emakethe yamafama bezimpelasonto, uzojabula kakhulu ngenduduzo yalezi zinwele zomculo zelineni. Ungakhetha kusuka emibala eyisithupha ehlukene ukuxuba futhi uhambelane nesigqoko sokugqoka esivele sikhona. Ubunwe obukhululekile, usayizi owodwa. Itholakala Black, Blue, Sky Blue, Grey, Pink and Red.
Usayizi Ubude Waist I-Hip Ithanga
Usayizi owodwa 99 66 - 98 138 78